June 2017 - ♥ ♥ MY GREEN LIFE ♥ ♥
Phyu Lwin June 29, 20170Comments
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါရှင် ...။
ဒီရက်ပိုင်း နည်းနည်းအားသွားင်္ပြီဆိုတော့ စာတွေ ပြန်ရေးဖို့ စိတ်ကူးရလာပါပြီ ...။
ဈေးမဝယ်ဖြစ်တာ လနဲ့ချီကြာသွားပြီ ...။ အချိန်မရတာနဲ့ပဲ အရင်ရှိနေတာလေးတွေနဲ့ ဖြစ်သလို သုံးနေတာ ..။ တကယ်တော့ Skincare၊ makeup ပစ္စည်းတွေ ပြတ်လုပြတ်ခင်ဖြစ်နေတာ ကြာပြီရယ် ...။ အဲဒါနဲ့ မနေ့ကမှ ကျောင်းနဲ့အနီးဆုံး Shopping mall ကို သွားဖြစ်တယ် ...။ နာမည်က Qanat လို့ ခေါ်ပါတယ် ...။ အွန်လိုင်းကနေ ဝယ်လို့ရပေမယ့် ဂျပန်မှာလည်း အွန်လိုင်းက သိပ်စိတ်မချရပါဘူး..။ အထူးသဖြင့် export products တွေဆိုရင် ဈေးပိုချိုသလောက် အတုတွေဖြစ်တာ များတယ် ..။ အဲဒါကြောင့် ကျမကတော့ အဲလိုပစ္စည်းတွေတင်သာမကဘဲ ဂျပန်ထုတ်ပစ္စည်းတွေလည်း အွန်လိုင်းက မဝယ်ပါဘူး...။ ဆိုင်မှာပဲ စိတ်ကြိုက်ကြည့်ပြီး ဝယ်ဖြစ်တယ် ....။
ပြီးခဲ့တဲ့ ခြောက်လလောက်အတွင်း စာတွေနဲ့နပန်းလုံးနေရတာနဲ့ Youtube နဲ့ Blog တွေလောက်ပဲ အားတဲ့အချိန် ကြည့်ဖြစ်တယ် ...။ နိုင်ငံခြားက ကောင်မလေးတွေရဲ့ ချစ်စရာ ဘလော့ဂ်လေးတွေ အများကြီးတွေ့မိတယ် ...။ ကိုယ့်ထက်ဆို ၁၀ နှစ်လောက်တောင် ငယ်ကြမယ်ထင်တယ် ....။ အခုတလော ခေတ်စားနေတဲ့ Blog templete လေးကို သဘောကျတာနဲ့ အဲလိုမျိုးလေး free ရတဲ့ဟာကို မတွေ့တွေ့အောင် ရှာထားရတာ ...။ Blogger templete တွေက ရိုးနေပြီဆိုတော့ မသုံးချင်တော့တာနဲ့ အခု တန်းပလိတ်အသစ်ကလေးကို ခေတ်နဲ့အညီ ပြောင်းထားတယ် ...။ တစ်ခုခုဝယ်ပြီးရင် Haul ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးသုံးပြီး ပြကြတာကို သဘောကျတာနဲ့ ကိုယ်လည်း အခု ဒီစကားလုံးလေးသုံးထားတယ် ...။ 😜😝 ရယ်ရတယ်နော်.. ကိုယ်လဲ ကလေးတွေ လုပ်သလို လိုက်လုပ်တတ်သေးတာ မကြီးမငယ်နဲ့ .. 😬😬😬
မနေ့က လိုတာလေးတွေ နည်းနည်းပါးပါးသွားဝယ်ရင်း ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်လေးတွေမို့ ဒီမှာ ခဏလာပြီး အမှတ်တရတင်တာပါ ...။ ကျမအကျင့်က ဈေးဝယ်ရင် အချိန်တအားယူတာကို သိပ်မကြိုက်ဘူး ..။ အချိန်တွေကုန်လို့ ..။ Window shopping လား သိပ်မုန်းတာ ..။ မဝယ်ဘဲ ဟိုလျှောက်ဒီလျှောက် ကြည့်နေရတာလောက် အချိန်ကုန်လူပမ်းဖြစ်တာကို မုန်းလွန်းလို့ အိမ်က မောင်တွေ ညီမတွေနဲ့ဆို ဈေးဝယ်ရင် သိပ်မတည့်ဘူး ...။ ကျမဈေးဝယ်မယ်ဆိုရင် အိမ်မှာကတည်းက ဘာဝယ်မယ်ဆိုတာ စဉ်းစားထားတယ် ...။ ဟိုရောက်ရင် အဲဒီပစ္စည်းရှိတဲ့နေရာကို သွားပြီး လိုတာဝယ်တယ် ပြန်လာတယ် ..။ မနေ့က အချိန်သိပ်မရတာနဲ့ အရေးတကြီးလိုတာတွေပဲ ဝယ်လာတယ် ....။ နောက်မှ ထပ်သွားရပြန်ဦးမယ် ...။
ဝယ်လာတဲ့ထဲမှာ အကြိုက်ဆုံးတစ်ခု ...။ Maybelline က ဒီ BB cushion လေးကို ဒီတလောမှာ review တွေတော်တော်များများရေးကြပြီး rating တွေ အများကြီးပေးကြတယ် ...။ ဒီမှာက အခု နွေရာသီစနေပြီဆိုတော့ တော်တော်ပူနေပြီ ...။ အဲတော့ Foundation ရော powder ရော ၂ ထပ်ကြီးလိမ်းရင် ချွေးတွေပြန်ပြီး နေရခက်မှာစိုးတာနဲ့ ဒါလေးကို ဝယ်လာခဲ့တာ..။ ဒီနေ့လိမ်းခဲ့တာ အရမ်းမိုက်တယ် ...။ အဆီမပြန်ဘူး ..။ ထူထူကြီးဖြစ်မနေဘဲ သိပ်သိပ်သည်းသည်းလေးနဲ့ နေလို့လည်း ကောင်းတယ် ..။ Made in Korea ဆိုတော့ အဲဒီက makeup trend အတိုင်း ပြောင်ပြောင်းဝင်းဝင်းလေးဖြစ်နေတာ သိပ်သဘောကျတာပဲ ..။ ဒီမှာကတော့ ၂၅၉၂ ယန်းဆိုတော့ မြန်မာမှာထက်တော့ ဈေးများမယ်ထင်တယ် ..။ မြန်မာမှာက ၂ သောင်းလောက်ပဲ ရှိတာလားလို့နော် ..။ ဘာဖြစ်ဖြစ် ဒါလေးကိုတော့ တော်တော်ကြိုက်တယ် ...။
နောက်တစ်မျိုးက လက်စွဲတော် SK2 ကုန်နေတာနဲ့ Essence set တစ်ခု ဝယ်လာခဲ့တယ် ..။ SK2 ကတော့ ဘာမှ သိပ်ပြောစရာတောင် လိုမယ်မထင်ဘူးနော် ...။ Skin ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်ကအတိုင်း ပြန်နုပျိုသွားစေတယ်ဆိုတာ တကယ်မှန်တယ် ...။ ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ ရလာတဲ့အကျိုးက တကယ့်ကို တန်ပါတယ် ..။ ဒီ တစ် set ကို ယန်း ၇၀၀၀ ကျော် ပေးရတယ် ။ အတိအကျတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး ...။
ဒီ Facial foam ကို နိုင်ငံခြားက Blogger တော်တော်များများ review ပေးကြတယ် ...။ Drugstore brand ထဲမှာတော့ အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံးတဲ့...။ ဈေးကလည်း ချိုတယ် .. ။ ယန်း ၅၀၀ လောက်ပဲ ပေးရတာ ..။ သူ့ကိုသုံးတာက အခြား facial foam တွေသုံးတုန်းကထက် မျက်နှာကိုပိုသန့်သွားစေတယ်လို့ထင်တယ်။ မြန်မာမှာတော့ ရှိနေပြီလားမသိပေမယ့် တော်တော်များများကတော့ ဒီကလူကြုံတွေကနေတစ်ဆင့် မှာသုံးကြတယ် ..။ 🙈🙈 နောက်က လက်ပုတော့ထဲက ပုံကို မကြည့်ကြပါနဲ့နော် ...။ ခုမှ သူများဓါတ်ပုံရိုက်တာလေးတွေကို တုပြီး လှတပတလေး ရိုက်တတ်အောင် ကျင့်နေလို့ပါ 😀
ဆားဝက်ခြံတွေပျောက်ဖို့ Charcoal mask က နာမည်ကြီးနေတာနဲ့ Scurb ကိုလည်း Charcoal scrub စမ်းသုံးကြည့်ဖို့ ဝယ်လာခဲ့တယ် ..။ တစ်ခါမှတော့ မသုံးဖူးပေမယ့် အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ် ...။သူက ယန်း ၅၀၀ ကျော်ပဲ။ မြန်မာငွေနဲ့ဆို ၆၀၀၀ လောက်ပါပဲ ..။
နောက်တစ်မျိုးက ခေါင်းဘီးအကြဲ ဝယ်လာခဲ့တယ် ..။ ဆံပင်က ပြန်ရှည်နေပြီဆိုတော့ ဆံပင်ကျွတ်မှာစိုးတာနဲ့ ဘီးအကြဲနဲ့ ဖြီးဖို့ ဝယ်လာခဲ့တယ် ..။ ဒါလည်း ၅၂၀ ယန်းပဲ ပေးရတယ် .။ ဖြီးတာ ဆံပင်လုံးဝမကျွတ်ဘူး..။ အသက်ရလာပြီတော့ ဆံပင်တွေ ပါးမသွားအောင် သေချာ ထိန်းသိမ်းမှဖြစ်မယ်လေ .. နော်။
နောက်ဆုံးတစ်မျိုးက ပိုက်ဆံအိတ် ..။ သုံးနေတဲ့တစ်ခုက တော်တော်လေးကို အိုဟောင်းနွမ်းနေပြီ..။ Brand တစ်ခုခုထဲက ကိုင်ချင်တာနဲ့ မဝယ်ဖြစ်တာ ခုတော့ မဝယ်လို့မဖြစ်လောက်အောင် စုတ်နေတာနဲ့ပဲ အသစ်တစ်လုံးဝယ်ခဲ့တယ် ..။ တစ်လုံးတည်း ဝယ်ရင် ၃၀% discount နှစ်ခုယူမှ ၄၀% discount ဆိုတာနဲ့ ၂ ခု ယူလာခဲ့တယ် ..။ တစ်ခုက ညီမလေးကို လက်ဆောင်ပေးဖို့..။ ကိုင်ချင်တာက LV ဝယ်နိုင်မှာက MK လောက်လို့ မှန်းထားပေမယ့် တကယ်တမ်းဝယ်တာကတော့ တွေ့ရာဝယ်လာလိုက်တာပါပဲ ...။ ဒီလောက် ပိုက်ဆံအိတ်သေးသေးလေးတွေကို MK ဆိုလည်း ယန်း ၃ သောင်းလောက် ပေးနေရမှာဆိုတော့ နှမြောတာနဲ့ အခု ယန်း ၃၀၀၀ တန်လေးပဲ ဝယ်လိုက်တယ် ..😂😂😂😂။ ဘာဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ဘာသာ ယုံကြည်မှုရှိရင် ပြီးတာပဲ 😉😉။
နောက်မှ အကြိုက်ဆုံး မိတ်ကပ်တွေနဲ့အတူ ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ် ...။ 😃 အပျော်လျှောက်ရေးတာဆိုတာထက် ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကို ဘလော့ဂ်အလည်လာသူတွေ သိသွားတော့လည်း အကျိုးရှိတာပေါ့ ..နော်။
See you later! Bye for now 💜💗💖💕
Labels: Body and Skin care, Days In Japan
Phyu Lwin June 27, 20170Comments
မနေ့ကပဲ final defense ပြီးသွားပါတယ်..။ အဲဒီရက်အလွန်ကို မျှော်ပြီး ပျော်နေလိမ့်မယ်လို့ထင်ထားခဲ့မိပေမယ့် ထင်ထားသလောက်တော့ ပျော်စရာမကောင်းခဲ့ပါဘူး....။ defense ပြီးတဲ့နောက် တွေးစရာ လုပ်စရာတွေ များလာတယ် ..။ ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ်လည်း ပြန်စဉ်းစားမိလာတယ် ..။ ဘာလို့ ဒီလို စာတွေပဲ လေ့လာနေရတဲ့ ဝဲဂယက်ထဲပဲ တဝဲလည်လည် ရုန်းကန်နေရတာလဲပေါ့...။ Defense မတိုင်ခင် တစ်ပတ်လောက်အတွင်းဟာ presentation file ကို စိတ်တိုင်းကျအောင် ပြင်နေရတာနဲ့ မအိပ်လိုက်ရတဲ့ရက်တွေလည်း ရှိခဲ့တယ် ..။ သေချာတာတော့ ရူးမသွားသေးဘူး ထင်ပါတယ် ..။ စာအုပ်မအပ်ခင်တုန်းကတစ်ခါ မအိပ်ရတဲ့ရက်တွေ ရှိခဲ့သေးတယ်....။ ပညာတွေတောက်လျှောက်သင်လာခဲ့တဲ့အတောအတွင်း ဒီအကြိမ်ဟာ ဘဝမှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားဖူးခြင်းပါပဲ ...။ အသက် ၅ နှစ် သူငယ်တန်းကတည်းက စာတွေနဲ့ပဲ လုံးပမ်းနေခဲ့တာ အခု အသက် ၃၀ ကျော်လာတဲ့အထိ အပြင်လောကအကြောင်း ဘာမှမသိဘဲ ဒီသံသရာထေဲလည်နေတာ ဖြစ်သင့်ရဲ့လားဆိုတာတော့ ပြန်စဉ်းစားရဦးမယ် ..။ ဒါပေမယ့်လည်း ကိုယ်ပဲ ပုံမှန်မဟုတ်တာလားတော့မသိပေမယ့် ဒီနေ့ post-doc ခေါ်တဲ့ call တွေ လိုက်ဖတ်ဖြစ်နေသေးတယ် ...။
မနေ့က defense မှာ lab. က ကျမနဲ့ တရုတ်မလေး တစ်ယောက် လုပ်ကြတာဆိုတော့ congratulations cake က ၂ ခု စားရတယ် ..။ ပန်းစည်းလေးလည်း lab member တွေက စုပြီး စီစဉ်လက်ဆောင်ပေးကြတာ ...။ အားလုံးပြီးစီးသွားမှပဲ lab. က သူတွေအားလုံးနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး စကားထိုင်ပြောဖြစ်တယ် ..။ အရင်ကတော့ စာပဲ ကုန်းရုန်းလုပ်နေရတာဆိုတော့ သေချာစကားမပြောဖြစ်ဘဲ seminar ရောက်မှသာ တွေ့ဖြစ်ကြတာကိုး ..။ နောက်လထဲတော့ အားလုံးစုပြီး ကမ်းခြေတစ်ခုကို ခရီးသွားကြဖို့ စီစဉ်ထားကြသေးတယ် ..။ မြန်မာသူငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်း စုပြီး လျှောက်သွားရဦးမယ် .။ တစ်ယောက်တည်းလည်း မရောက်သေးတဲ့နေရာတွေကို လျှောက်လည်ဖို့ အစီအစဉ်တွေ ဆွဲရဦးမယ် ..။ အဓိကက ငွေရေးကြေးရေးကလည်း တွက်ချက်ရပြန်ဦးမယ်.။ မပြန်ခင် ဝယ်ချင်တာတွေကလည်း အများကြီး။ မြန်မာမှာက ဒီမှာထက် ၃ ဆ လောက်ဈေးများတာဆိုတော့ လိုမယ်ထင်တာလေးတွေ ဝယ်သွားရဦးမယ် ..။ ဂျပန်က drug store brand တွေက မြန်မာရောက်ရင် high-end brand တွေဖြစ်ပြီး ဈေးတွေကြီးလွန်းလိုက်တာ..။
စာတွေလည်း အများကြီးပြန်ရေးနိုင်အောင် ကြိုးစားရဦးမယ် ...။ ဘာတွေရေးဖြစ်မလဲတော့ အတိအကျမရှိပေမယ့် ဟိုဟာရေး ဒီဟာရေးကပဲ ကိုယ့်စတိုင်လ်ဖြစ်နေတော့ ရေးချင်တာရေးရမှာပေါ့လေ...။ လောလောဆယ်တော့ အိပ်ရေးပျက်ထားတဲ့ဒဏ်တွေကြောင့် လူက စိတ်သိပ်မရွှင်လန်းသေးဘူး....။ နောက်မှပဲ ရှေ့ဆက်လှမ်းမယ့်လမ်းတွေအတွက် သေချာစဉ်းစားရည်ရွယ်ဖို့ လုပ်ရဦးမှာ..။ သေချာတာတော့ မြန်မာပြန်ရောက်တာနဲ့ မိသားစုဘဝတစ်ခုဖြစ်အောင် ကလေးယူဖို့ အရင်ဆုံးကြိုးစားဖြစ်မှာပါ ...။
နောက်တစ်ခု ကျမရဲ့ မကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုက အရေးကြီးတဲ့ event တွေအတွက်ဆို ဘယ်တော့မှ ကောင်းကောင်းမှတ်တမ်းတင်ထားလေ့မရှိတာ..။ အဆိုးဆုံးက ဘွဲ့ ၂ ခုရပြီးပေမယ့် သူများတွေလို အ်ိမ်မှာ အလှချိတ်စရာ ဘွဲ့ဓါတ်ပုံတစ်ခုမှ မရှိပါဘူး။။ ပထမဘွဲ့တုန်းက မြန်မာမှာပေမယ့် ဘွဲ့နှင်းသဘင်မှာ ကိုယ့်ကင်မရာနဲ့ပဲ အဆင်ပြေသလို ရိုက်ဖြစ်တော့ ကိုယ်တစ်ပိုင်းပုံ တစ်ပုံမှ မရှိဘူး..။ မိတ်ကပ်လည်း မလ်ိမ်းဖြစ်တော့ မပြင်တတ်မဆင်တတ်ချိန်ဖြစ်တဲ့အပြင် ကင်မရာကလည်း ပရိုမဟုတ်တော့ ကောင်းကောင်းကန်းကန်းပုံတစ်ပုံမှမရှိခဲ့ဘူး..။ ဂျာမနီမှာတုန်းကတော့ Graduation ချိန်က ကိုယ်ပြန်သွားပြီး ၅ လလောက်နေမှ လုပ်တာဆိုတော့ ဘွဲ့တောင် တက်မယူလိုက်ရပါဘူး.။ ရုံးကပဲ EMS နဲ့ လှမ်းပို့လိုက်တာ။ မေ့နေခဲ့တာ ခုမှ သတိရမိ..။ အဲဘွဲ့လက်မှတ်ကိုင်ပြီး အိမ်မှာတောင် ဓါတ်ပုံမရိုက်ဖြစ်သေးဘူး..။ မနေ့ကလည်း အဲဒီလိုပါပဲ ။ အစက တွေးထားတာ ကင်မရာယူလာပြီး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်ကို သေချာ ရိုက်ခိုင်းမယ်ပေါ့ ...။ တကယ့်နေ့လည်း ရောက်ရော အလုပ်တွေ ရှုပ်နေတာနဲ့ပဲ အာရုံမရတော့တာနဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောဖြစ်တော့ဘူး ..။ Defense လာတက်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေက နည်းနည်းပါးပါးရိုက်ပေးထားလို့သာ အချို့ပုံလေးတွေ အမှတ်တရအနေနဲ့ ရထားတယ် ..။ ဒါပေမယ့် သူတို့လည်း အဝေးက ရိုက်ရတာလည်းဖြစ် ဖုန်းနဲ့ပဲဆိုတော့ ကြည်ကြည်လင်လင် ပြတ်ပြတ်သားသားတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ..။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မှတ်တမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ ရှိတာပဲ ရိုက်ပေးတဲ့သူငယ်ချင်းတွေကို တကယ်ကျေးဇူးတင်မိတာပါ ..။ ဓါတ်ပုံရိုက်တာ အရမ်းဝါသနာပါပေမယ့် ကိုယ့်ဘဝပေးကုသိုလ်ကံကပဲ ဘဝရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ event တွေမှာ မှတ်တမ်းတင်ဖို့ ကံမစပ်တာပေပဲလား မသိပါဘူး...။ အဆိုးဆုံးက ငယ်ရွယ်တုန်းမှာ prewedding ပုံတွေလည်း သေချာ မရိုက်ဖြစ်ဘူး ..။ အမျိုးသားက ဂျပန်ကို လာလည်တာ ၂ ခါရှိပြီ ..။ post wedding ဓါတ်ပုံရိုက်ကြမယ်ဆိုပြီး စီစဉ်ထားကြပေမယ့် ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုနဲ့ပဲ မရိုက်ဖြစ်လိုက်ပါဘူး...။ မြန်မာပြန်ရောက်ရင်တော့ အသက်လည်း ငယ်တုန်း လူလည်း ကလေးမွေးပြီး ပုံဆိုးပန်းဆိုးမဖြစ်သေးခင် ရိုက်ဖြစ်အောင် ရိုက်ဦးမှာ..။ ဒီတစ်ခါ ဘွဲ့ယူရင်တော့ ပုံကောင်းကောင်းလေးလည်း ရနိုင်ကောင်းပါရဲ့ ...။
လူက စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ မကပ်တော့ စာရေးတာ ဟိုရောက်ဒီရောက်ဖြစ်နေရင်လည်း သည်းခံပေးကြပါလို့ ...။ ဒီနောက်ပိုင်းစာရေးရင် လိုတဲ့နေရာတွေမှာ ကိုယ့်ဓါတ်ပုံတွေ ထုတ်ပြဖို့လည်း စဉ်းစားထားပါတယ် ...။ အရင်ကတော့ ကိုယ့်ပုံကိုယ် Public မတင်ရဲတာက အင်တာနက်ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကို ကြောက်လို့ပါ ...။ ကိုယ့်လို ပါချီပါချက်ကိုတော့ ဘယ်သူမှ ဘာမှလည်း သိတာမဟုတ်ပါဘူးလေ...။ ကွကိုယ်သာ စိတ်တွေပူနေတတ်တာ 😂😂။ ခုတော့ ဘလော့ဂ်တွေ ခေတ်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ လူတွေ သိပ်စိတ်မဝင်စားတော့တာကြောင့် ဘာတင်တင် ဘယ်သူမှ မြင်တာမဟုတ်တော့ ဒီမှာပဲ ကိုယ်ရေးချင်တာလျှောက်ရေး ကိုယ်တင်ချင်တာတင်ဖို့ စိတ်ကူးထားပါတယ် ...။
OK then!! See you later 👐👐
Thanks for coming here 🙏😘😘😘😘😘
Labels: Days In Japan, Flowers, အမှတ်တရ အချိန်များ
Phyu Lwin June 13, 20175Comments